Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Toronto na Grenada na Air Canada ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Caribbean • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị Canada chọsiri ike ime njem na Grenada na-atụ anya na a ga-enwe mmụba na njem mba ofesi n'oge oyi, ọkachasị ebe ihu igwe na-ekpo ọkụ.
Grenada na-anabata nlọghachi nke ọrụ ikuku si Canada na nke mbụ n'ime otu afọ.
Na 2019, Grenada nabatara mkpokọta ndị ọbịa Canada 17,911.
Travelbrands bụ netwọọdụ “super nkesa” nwere ma na-arụ ọrụ nke nwere ụdị ụlọ ọrụ azụmaahịa/ọnlaịnụ ise na ụdị ndị na-eme njem nlegharị anya iri.
Na Sọnde, Ọktoba 31, Grenada nabatara nlọghachi nke ụgbọ elu si Canada na nke mbụ n'ime otu afọ. Ụgbọ elu Air Canada 1066, Boeing 737 Max 8, rutere n'elekere 2:55 nke uhuruchi. Onye isi ụlọ ọrụ Grenada Tourism Authority (GTA) Petra Roach, ndị isi ahịa Renee Goodwin na Shanai St Bernard kelere Captain John Petropoulos na ndị njem 169 nke ọma na egwu na-akụ egwu nchara nchara. E nyere onye na-anya ụgbọelu na ndị ọrụ ụgbọ mmiri akwụkwọ tebụl kọfị mara mma, Grenada Heritage " Njem Nlegharị anya Site n'Ebe na Oge " na nhọrọ nke chọkọletị emere n'ime obodo. E nyere ndị njem onyinye onyinye tote nke gụnyere nchịkọta ezigbo ngwaahịa Grenadian.
Iji kpalite agụụ maka ụgbọ elu ugboro abụọ kwa izu site na Toronto, na Sọnde na Wednesde, GTA ebidola mkpọsa ahịa ike na-eji usoro ọdịnala, dijitalụ na mgbasa ozi mmekọrịta n'ahịa Canada. Air Canada na ndị otu njem, TravelBrands.
The Air Canada mkpọsa ga-agụnye, mana ejedebeghị na, ọrụ dijitalụ na ibe Facebook ha na Weather Network yana kredit nke 5,000 Aeroplan miles maka onye ọ bụla njem na-ede akwụkwọ ebe ọ ga-aga n'ime mkpọsa izu atọ.
Travelbrands bụ netwọọdụ “super nkesa” nwere ma na-arụ ọrụ nke nwere ụdị ụlọ ọrụ azụmaahịa/ọnlaịnụ ise na ụdị ndị na-eme njem nlegharị anya iri. Sunquest, Exotik Tours, Holiday House, na ụdị ndị ọzọ dị ka FunSun Vacations, Boomerang Tours, RedTag.ca na ALBATours niile dị n'okpuru otu nche anwụ, na-eme TravelBrands ike na ụlọ ọrụ njem Canada.
Mgbasa ozi ha ga-agụnye iweghachi ibe ụlọ izu abụọ nke Redtag.ca, ọkwa ngosi mkpọsa Deal Alert, mgbasa ozi ọkọlọtọ na vidiyo vidiyo. Ndị na-eme njem na-ede akwụkwọ ezumike na Grenada ga-anata ugboro 5 isi ihe nkwụsi ike mgbe niile maka oge mkpọsa ahụ.
Onye isi oche GTA, Petra Roach kwuru, "Ndị Canada na-achọsi ike ime njem, anyị na-atụkwa anya na a ga-enwe mmụba na njem mba ụwa n'oge oge oyi, ọkachasị ebe ihu igwe na-ekpo ọkụ. Ya mere, anyị kwesịrị ka a na-ahụ anya n'ọma ahịa iji nweta uru nke ọchịchọ na ọnọdụ a na-achọsi ike Grenada dị ka ebe kacha mma maka ndị Canada na-achọ ụzọ mgbapụ site na oyi oyi ruo ezumike n'ebe ezigbo njem."
Na 2019, Grenada nabatara ngụkọta nke ndị Canada 17,911.